LGBTQ Qiimeynta Sinaanta Shirkadaha iyo LGBTQ Bulshada & Xirfadleyda LGBTQ Qiimeynta Sinaanta Shirkadaha iyo LGBTQ Bulshada & Xirfadleyda
Ku dhaji dhacdo dhacdo
Foomka Ololaha Crowdfunding
Shaqo Raadinta & Soo Dejinta Shaqo
Liiska Shaqaaleeyaha iyo Qiimeynta
Isbarbar dhig loo shaqeeyaha
Bixi Macluumaadka Xiriirka Loo -shaqeeyaha
Wax dheeri ah ka baro OutBüro
Qeybaha - Codadka OutBüro
Ka dhegeyso Codadka OutBüro barnaamijka aad ugu jeceshahay
Ku taliya Martida Wareysiga
U gudbi Maqaalka
Loo shaqeeye / Summad Ilaha
Kiiska OutBüro Loo -shaqeeyayaasha
Qiimeynta Loo shaqeeyaha & Astaamaha
Waayo, LGBTS Ganacsatada
Waayo, LGBTS Faa'iido la'aan
Waayo, LGBTS Xirfadlayaal
Waayo, LGBTS Ardayda
ExtendaTouch - Taageerada Daryeelaha
Ku saabsan OutBüro
Ku darso OutBüro
OutBüro ee Hogaaminta Wararka LGBTS Sinaanta Shirkadaha
War-Saxaafadeed ama Maqaal ku-habboonayn iyo Qaybin
Daryeelka OutBüro + Qorshe
Daryeelka OutBüro + Qorshaha [Fiidiyow]
LGBTQ+ Xiriirinta Xirfadeed
Nagu soo biir hadda, waa bilaash!
Fadlan isticmaal cinwaan emayl sax ah.
Register Ilowday Password Dib u gudbi koodhka dhaqdhaqaaqa
In posts helay.
Wax kale oo dheeraad ah si aad u muujiso.
Ka warbixi mawduucyo udub
Sababta loogu talagalay Warbixinta:
- dooro sabab - Hadal cay ah / nacayb ahProfile been abuur ahContent HaboonaynKu xadgudbay xuquuqdaadaWeerar ama dhibaataynCaqli xumoEreygaSpammingWelwelka Ismiidaaminta ahRabshadaha Dadka Kalekale
Soo Gudbi Warbixinta
XADGUDUB: Fadlan dooro Sababta Warbixinta. XADGUDUB: Fadlan buuxi Sababta Warbixinta.
La wadaag ...
Ma hubtaa inaad rabto inaad tirtirto tan?
Ma hubtaa inaad rabto inaad tirtirto Ha'yaddaada?
Tani waxay kaa saari doontaa dhammaan fariimahaaga, keydinta macluumaadka oo aad tirtirto koontadaada.
Tan lama beddeli karo
La qaybso Post this
DadweynahaXubnaha GolahaSaaxiibada KaliyaKaliya aniga
Natiijooyin looma helin.
The LGBTQ+ Xirfadle & Bulshadda Xiriirisa Ganacsadaha
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida OutBüro adiga, ganacsigaaga, ama ururkaaga u yahay. Fiiri qeybaha kala duwan ee ku hoos jira liiska Kheyraadka.
As LGBTS waxaan la kulannaa caqabado badan oo dadka kale aysan la kulmin.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay goobta iyo wareysiyada fiidiyaha ee cajiibka ah. Waxaa i taabtay fiidiyaha aad wadaagteen Gina. Waxay qalbigayga ka jebisaa inaan maqlo sheekooyinka dadka iyo sida ay u wajahaan dhammaan halgankan nafsiyeed ee ahaanshaha LGBTQ. Aniguba kamaan ahayn naftayda saxda ah goobta shaqada sababtoo ah waxaan ka baqayaa takoorid. Murugo laakiin run. Waad ku mahadsan tahay, Dennis, wax kasta oo aad samayso.
Ma jiraan wax kale oo banaanka ka jira sida OutBüro
Todd Evans - Madaxa Rivendale Media
Waan matalaynaa 95%% LGBTQ warbaahinta (daabacan iyo dijitaal ah) gudaha USA iyo Kanada, aadna waan ula socdaa mid walba LGBTQ hay'adda warbaahinta adduunka. Ma jiraan wax la mid ah OutBüro. Waxay fursad weyn u tahay bulshadeenna iyo sidoo kale loo shaqeeyaha iyo sumadaha si ay ula falgalaan LGBTQ bulshada sida meel kale.
Muuqaalka iyo matalaadda waxay abuurayaan waddo loo maro sinnaanta sidaa darteed jiilka dambe ayaa u sahlaya.
Ashley Brundage - Qoraa Trans iyo Ku -xigeenka Wakiilka D&I
Xiriirinta xirfadda ee OutBüro waxay taageertaa muuqaalka iyo dib -u -soo -kabashadafiirsasho. Xirfaddayda ilaa hadda lataliyayaashu waxay fure u ahaayeen guushayda. Waan jeclahay in OutBüro u oggolaanayso xubnaha inay isku xirmaan oo raadsadaan a hage ama hage si ay ugu koraan noloshooda xirfadeed iyagoo is -kaalmaynaya.
Pku dhawaaqid: [baxay] [byoo r-oh]
Qeexid & Macno:
Out waa hadal caam ah, oo si fiican u aasaasan adduunka dhexdiisa LGBTBulshada Q oo muujineysa in qof uusan qarinaynin aqoonsigiisa qofka qolka isla markaana wuxuu ula jeedaa ficilkii "ka soo bixida" qolka.
xafiiska Jarmal ahaan macnaheedu waa "xafiis". Markii si sax ah loogu dhawaaqo waxay u egtahay sida erayga Ingriisiga ah "b Bureau" oo macnaheedu yahay xafiis ururinta ama qaybinta wararka ama macluumaadka, isku dubaridka shaqada, ama qabashada adeegyada cayiman; wakaaladda.
Xubnaha ugu dambeeyay
Qaybaha Mawduucyada Select Category Arts Business Maaliyadda Ganacsiga Maareynta Ganacsiga Faallooyin Kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada Wararka Kala-duwanaanta iyo Ka Qayb-qaadashada Education Sumcadda Loo shaqeeyaha Qiimeynta Loo shaqeeyaha Kheyraadka Loo shaqeeyaha Entertainment Kheyraadka Ganacsi dhacdooyinka Hoolka Magaalada ee Gay Caafimaadka Sida loo Human Resources Dhacayadiisa Shaqo raadinta Suuq- Networking News Koritaanka Shakhsi ahaaneed Podcasts Urur Siyaasadeed / PAC Warkii Caawa Suuq qorista Resources Caddaaladda Bulshada GOORMUU Ardayda Studies Technology safarka
AllXisaabinta / MaaliyaddaMaamulka / Wadaadka / XoghayntaHorumarinta GanacsigaConsultantAdeegga macaamiishaDesignEngineeringFulinta / MaamulkaXarumahaGanacsiga guudHuman ResourcesTechnology InformationInventorywarshadahaSuuq-CaafimaadkakaleAdeegyada ProfessionalIibsashadaHubinta TayadaResearchAmmaankaSalesScienceShippingShaqada Xirfada LehIstaraatiijiyad / QorsheynChain Supply
AllMid kale / Aan Mareykan aheynAlabamaAlaskaAlbertaArizonaArkansasBritish ColumbiaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDist. KolombiyaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineManitobaMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew BrunswickNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNewfoundlandNorth CarolinaNorth DakotaWoqooyi-galbeed Terr.Nova ScotiaNunavutOhioOklahomaOntarioOregonPennsylvaniaAmiir Ed. Ma yahay.Puerto RicoQuebecRhode IslandSaskatchewanSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingYukon Territory
# baraaruga #miyirka #donmiguelruiz #donmiguelruizjr #eckharttolle #elizabethlykins #elizabethmlykins #milicsiga elykins # Ganacsade # naxariis #lgbt #lgbtq #miyad #xigashooyinka maskaxda #milicsiga #Arrimo iskaa wax u qabso ah # nolol #sydneybanks #saddex qodob #saddex mabda'a macalinka
LGBT+ Shirka Online Work 2022
Dhammaan xuquuq dhowran
LGBTS Kheyraadka Xirfadaha Xirfadeed
LGBTS Kheyraadka Ganacsi
Soo gudbi foomka qabanqaabiyaha
Soo gudbi Foomka Goobta
Dashboardka Goobta Dhacdooyinka
Soo gudbi Podcast
Crowdfunding – Aan is taageerno
Crowdfunding Diiwaangelinta Isticmaalaha
WFP oo ku fashilantay Hawlgalkii
Liiska Ololaha WFP
Foomka Aqoonsiga WFP
Qaansheegga Deeqaha WFP